Tontolo iainana – Orinasa sinoa roa nahazo taratasy fampitandremana - AO RAHA Gazety Malagasy Online	Ny gazety Ao RahaTahiry
Tontolo iainana – Orinasa sinoa roa nahazo taratasy fampitandremana
Tsy fanajana ny bokin’andraikitra. Orinasa sinoa roa, fanamboaran-damba eny Ivato no hita tamin’ny fitsirihana fanaon’ny ofisim-pirenena momba ny tontolo iainana (One) fa tsy nanaraka ny fenitra mahakasika ny tontolo iainana. Samy nahazo fampitandremana izy ireo tamin’ny herinandro teo. «Taratasy fampahatsiahivana noho izy ireo tsy mampiasa ny dobo fikirakirana ny rano maloto avy nampiasaina no natao», hoy Ravoninjatovo Andry, lehiben’ny sampan-draharaha fanaraha-maso ny drafi-pitantanana ara-tontolo iainana eo anivon’ny One.
Nomena iray volana ireto orinasa ireto, hanarenany io tsy fanaraham-penitra io. « Raha tsy tanterahany izany dia miditra amin’ny fampiatoana ny fananany ny fahazoan-dalana ara-tontolo iainana ny One. Ny minisitera tompomarika indray avy eo no mandray ny fanapahan-kevitra hanakatona na tsia ny orinasa », hoy ny fanampim-panazavana.
Voalaza fa nanarina haingana ny lesoka aloha hatramin’izao ireo orinasa hafa, sendra ny tranga toy izao, raha ny fanamarihan’ny avy eo anivon’ny One hatrany, saingy andrasana ny hataon’ireto orinasa ireto. « Miteraka aretin’ny taovam-pisefoana, toy ny kohaka sy ny fahasemporana ny fiparitahan’ny rano maloto misy akora simika avy amin’ny orinasa toy izao, arakaraka ilay akora », hoy kosa ny fanazavan’ny mpitsabo.
Tontolo iainana, Mpanoratra Rijakely, 10.08.2012, 08:56	FIARAHAMONINA